प्रचण्डलाई विश्वास दिलाउन नेकपा भित्र दाैडधुप,उनिहरु भन्छन “सधै हामी प्रचण्ड संगै गाेलबद्द छौ।” « Janasahara
प्रचण्डलाई विश्वास दिलाउन नेकपा भित्र दाैडधुप,उनिहरु भन्छन “सधै हामी प्रचण्ड संगै गाेलबद्द छौ।”
श्रावण १७ काठमाडौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग बिच्किएका भनिएका नेताहरूले आफूहरू दायाँबायाँ नभएको प्रष्ट पारेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर एजेण्डामा पक्ष/विपक्ष भए पनि नेतृत्वमा प्रचण्डसँगै गोलबद्ध हुने विश्वास दिलाएका हुन्।
स्थायी कमिटी सदस्यहरु टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा र चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ बिहीबार बेलुका साढे ४ बजे प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। गत मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादी समूहका चार नेता अनुपस्थित भएका थिए। जसमा रामबहादुर थापा‘बादल’ टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट थिए। तर, बिहीबारको खुमलटार भेलामा बादल र भट्ट भने अनुपस्थित थिए।
प्रचण्डले कतै आफूलाई अविश्वास गरेका त छैनन् भन्दै नेताहरू प्रष्टीकरण दिन खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डलाई आफ्नै भनिएका नेताहरु पाखा लागेको महसुस भएपछि देवेन्द्र पौडेलले नै भेटघाटको पहल गरेको स्रोतले जनाएको छ। पौडेलले पहल गरेपछि जनार्दन शर्मा र चक्रपाणी खनाल प्रचण्डलाई विश्वास दिलाउन पुगेका थिए।
भेटमा प्रचण्डसँग बिच्किएका नेताहरुले आफ्ना कुरा खुलस्त रुपमा राखेका थिए। सबै नेताहरुलाई समान व्यवहार गरेको बताउँदै प्रचण्डले पार्टी संकटमा भएकाले पूर्व माओवादी एक हुनुपर्ने बताएको एक नेताले बताए। बाहिर सत्ता र शक्तिको लडाइँ लडिएको जस्तो देखिए पनि पार्टीमा विधि पद्धति स्थापित गर्न लडिएको प्रचण्डले खुलासा गरेका थिए।
सहभागी नेताहरुले आफूलाई पक्षपात गरिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। ‘हामीले के गल्ती गर्‍यौं? हामीलाई वास्ता गर्न छाडियो? सधैं साथ दिँदा पनि अवसरमा विभेद गरियो’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘हामीलाई अवसर दिने त परेको कुरा गोप्य भेला छलफलमा राख्नसमेत अविश्वास गरि प्रचण्डले पछिल्लो समय महत्वपूर्ण भेटघाटमा बोलाउन छोडेपछि यी नेताहरु बिच्किएका थिए। तर, नेतृत्वमा प्रचण्डसँगै भए पनि मुद्दामा पक्ष-विपक्ष हुनसक्ने स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले बताए।
‘मुद्दामा कहिले प्रचण्डसँग नजिक हुनसक्ने भयौं कहिले टाढा हुन सक्ने भयौं। नेतृत्वमा प्रचण्डसँगै गोलबद्ध छौं’ थापाले भने “अहिले पार्टी एकता र पार्टीमा विधि पद्धति स्थापित गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कर्तव्य हो।”